စိတ်ပညာရှင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှာကြံလူတွေစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ် - ထောက်လှမ်းရေးနှင့်မည်သို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရရှိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကဘာလဲ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အသီးအသီးဆုံးဖြတ် - အသိပညာတစ်ခုလုံလောက်သောအဆင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်ပြပေးခြင်းနှင့်သင်ခန်းစာများကိုတစ်အတွေးအခေါ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ယုတ္တိနိဂုံးချုပ်အတူသင်ယူရသောတစ်ဦးဉာဏနဲ့လူ့ဦးနှောက်၏အတိုင်းအတာရှိမရှိဖြစ်လာနည်း။
အသိပညာ, နားလည်မှု - အဆိုပါစကားလုံးအသံဘာသာသည့်ထောက်လှမ်းရေးပညာတတ်လက်တင်အသုံးအနှုန်းမှဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးရိပ်မိဖို့စိတ်ပိုင်းလွယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက်သတိရ အခြအသုံးပြုပုံယုတ္တိနိဂုံး - ကြီးမားသော volumes ကိုအတွက်လျင်မြန်စွာရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများ, ဘဝအခြေအနေများ, တက်ကြွစွာဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အကူအညီဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သဘောထားကို။ လူ့အသိပညာအဆင့်အကဲဖြတ်ဟုခေါ်သည် - ထောက်လှမ်းရေးလဒ်ကအထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုများကတွက်ချက်ထားသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်အရွယ် - အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပျမ်းမျှသက်တူရွယ်တူအသိပညာထောက်လှမ်းရေးတွေ့ရှိချက်များ၏အဆင့်များအတွက်အခြေခံဖြစ်ကြောင်း, လူတစ်ဦး၏အစစ်အမှန်အသက်အရွယ်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိုပါအိုင်ကျူပျမ်းမျှ - အိုင်အိုဒင်းမှုနှုန်း - 90 သို့မဟုတ် 110 ၏တန်ဖိုးများနှင့်အတူပေါင်း 100 မှတ်, ထိုညွှန်းကိန်း။ ပြည်သူ့အဘယ်သူ၏အိုင်ကျူ 110 အထက် - အလွန်အမင်းအသိဉာဏ်လူတစ်ဦးနှင့်အိုင်ကျူရမှတ် 70 မှာ - ထောက်လှမ်းရေး၏ချိုးဖောက်မှု, အကအနုတ်ဦးတည်။ ထောက်လှမ်းရေးများ၏အဆင့်ကိုအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်5နှစ်များ၏အသက်အရွယ်မှာကအဓိကအချက်တစ်ချက်အမွေဥစ္စာအားဖြင့်ကူးစက်သည့်ပညာတတ်သဘောထားကို, ပုံဖော်ယူဆနေသည်။
စိတ်ပညာ, စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလားတူဖြစ်စဉ်များ။ စဉ်းစား - ဝယ်ယူသိကျွမ်းခြင်းပညာအပေါ်အခြတည်ဆောက်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့စိတ်သဘောထား။ ထောက်လှမ်းရေး - ထိုဝယ်ယူအသိပညာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်း, တစ်ဆင်ခြင်တုံတရားအရေးယူမှုမှဦးဆောင်သည်ဟုစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးအနည်းငယ်စွယ်စုံကျမ်းဖတ်ပါနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပမာဏကိုင်ထားပေမယ့်အလေ့အကျင့်၌သူတို့ကိုလျှောက်ထားကြဘူး, ထောက်လှမ်းရေး၏ရှေ့မှောက်တွင်နိုင်သည် - လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအောင်မြင်မှုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောအသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီးလူတစ်ဦးချင်းစီ၏သဘောပေါက်လုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခုလက်မှတ်။
လူအတော်များများအဘယျသို့ဓာတုထောက်လှမ်းရေးတွေးမိ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်ပေါက်သော Impulses သတင်းပို့ဖို့အရေးယူမှုအလားတူဒေတာကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးအတွေးဖြစ်စဉ်များထုတ်လုပ်လူလုပ်သည့်စနစ်ဟုခေါ်တွင်အတုထောက်လှမ်းရေး။ ထိုကဲ့သို့သောထောက်လှမ်းရေး၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုအပေါ်သိပ္ပံဌာနခွဲသိပ္ပံဟုခေါ်သည်။ အကျွမ်းတဝင်ခေတ်သစ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (ကွန်ပျူတာ, စက်ရုပ်ကားရေကြောင်း) အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏သေဒဏ်စီရင်မှာပါရည်ရွယ်ပြီးအတုထောက်လှမ်းရေးစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့သာမန်လူတ၏အယူအဆအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။
မကြာခဏဆိုသလိုပညာတတ်လူတန်းစားနှင့်ပညာတတ်များ၏ concept ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများထဲမှအမျိုးအစားထဲမှာရောနှောလျက်ရှိသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်မဟုတ်, လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပေမယ့်မဆိုအခြေအနေမှာမသာ, ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဆင့်မြင့် - အသိဉာဏ်လူတစ်ဦးထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်ကြောင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ။ ပညာရှင်ပီသစွာပညာရေးနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်စေ့စပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - ပညာတတ်, အခြားသူများမှတုံ့ပြန်မှု, ပညာတတ်ပညာရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိသည်နှင့်ပိုက်ဆံ brainwork ဝင်ငွေ။
ပညာတတ်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိ encyclopedic အသိပညာ၏မြင့်မားသောအဆင့်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။ အဆိုပါပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အပြုအမူဉာဏရှိသူများအနေဖြင့်ရုပ်ပစ္စည်းကွဲပြားနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်သိပ္ပံပညာ၏အမျိုးမျိုးသောအကိုင်းအခက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးပံ့ပိုးမှုများကိုတစ်အိုင်ကျူမြင့်မားသော, အရေးကြီးသောအများပြည်သူအဖွင့်နှင့်အတူလူကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်, ထိုပညာတတ်ပြုပါလိမ့်မည်။
လူ့ထောက်လှမ်းရေးလျှော့ချနိုင်ပြီးအဆင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ထိုညီအစ်ကိုသို့မဟုတ်မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခေါ်တော်မူမွေးရာပါဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု - စိတ်ဖောက်ပြန်, ဝယ်ယူ - အိုမင်းသောစိတ်ဖောက်ပြန်, ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ထောက်လှမ်းရေး၏လျှော့ချရေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြင်ပအရင်းအမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်များမခံမယူသည့်အခါသူကအလုပ်လုပ်တဲ့အလောင်းတွေဆုံးရှုံးမှု (ဆုံးရှုံးသွားသောကြားနာ, မျက်မှောက်) ပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်, ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ကျရောဂါ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ဦးချင်းစီ၏ပင်ကိုစွမ်းရည်, လူတွေကိုအောင်မြင်စွာစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်အခြေခံနိုင်ပါတယ် - အောင်မြင်စွာဘဝအစီအစဉ်များအတွက်သဘောပေါက်, သင့်အကြိုက်ဆုံးအလုပ်အကိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာဘာလဲ - ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးအတွက်လိုက်ဖက်စွာအခြို့သောအခွက်တဆယ်ကိုတီထွင်ပေမယ့်ခဲ - တစ်ဦးချင်းစီ၏တဦးတည်းကသဘာဝစိတျသမားရိုးကျထောက်လှမ်းရေး၏အဓိကအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသည်:
သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုများသင်တန်းအတွက်သက်သေပြချက်အဖြစ်အမြင့်ထောက်လှမ်းရေးမကြာခဏတစ်ဦးကျိုးနွံအပြုအမူနောက်ကွယ်ကဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ တိကျစွာအလွန်အမင်းအသိဉာဏ်လူကို characterizing များအတွက်နည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးပြုလုပ်ရသေးဆက်ခံမထားပါဘူး။ အဘယ်သူ၏အဆင့်ကိုအိုင်ကျူ၏ပျမ်းမျှကိန်းဂဏန်းအထက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဝိသေသစရိုက်များ၏စာရင်းတစ်ခု။ ဤအညွှန်းကိန်းအပေါ်အသိဉာဏ်လူများပြဌာန်းခွင့်အတွက်နည်းလမ်း - ကခြွင်းချက်:
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ရှေ့မှောက်တွင် - ကြောင်တစ်ကောင်;
ထောက်လှမ်းရေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - စနစ်တကျလေ့အကျင့်ကြောင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကပြောသည်နိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေထောက်လှမ်းရေးတိုးမြှင့်မှတ်ဥာဏ်လေ့အသစ်အသိပညာနားမလည်နှင့်အလေ့အကျင့်၌သူတို့ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ရန်ကဘယ်လို ထောက်လှမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် - တီဗီကိုကြည့်၏အလေ့အထစွန့်ခွာဖို့, ကအသုံးမကျသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမမြင်ရတဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းမှတ်ဉာဏ်ပါဝငျ။ တစ်နိမ့်ကယ်လိုရီမုန့်ညက်ကိုစား - အစားအစာအစာအိမ်ရန်ခက်ခဲသည့်အစာခြေကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ကုန်ကျစရိတ်လိုအပ်, ဦးနှောက်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံး။ Excellent ကအိုင်ကျူအဆင့်မြှင့်:
အားကြီးသောပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ပညာတတ်များနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း - စစ်တုရင်, ဖဲချပ်များနှင့် backgammon;
အိပ်စက်ခြင်း၏ကျန်းမာ 8 နာရီ;
အသစ်သောအသိပညာထုတ်လုပ်ရန်ဦးနှောက်၏ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေး, တစ်ဦး passive လမ်းအတွက်နေရာတစ်နေရာယူနိုင်သည် - ဖတ်နေစာအုပ်များ, သင်ယူမှုများအတွက်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားလေ့လာနေ။ အသိဉာဏ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လယ်ပြင်တွင်လေ့လာရေးဂိမ်းများ, ပညာရေးအတှေးအချေါနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကွန်ပျူတာဂိမ်းထဲမှာဝငျစားသောဤနည်းစနစ်အများစု, ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဥာဏ်လေ့ကျင့်ရေးများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမကျ ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ပင်လူကြီးထဲမှာ, စိတျထဲမှာပိုက်ဆံ၏ကုန်ကျစရိတ်များစနစ်တကျတွက်ချက်မှတ်ဥာဏ်လေ့ထိုအချက်ကိုသက်သေပြ။ ထောက်လှမ်းရေးကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလေ့အလုပ်အကိုင်:
(Right-handers အဘို့ - လက်ဝဲဘက်) ကို unaccustomed လက်လေ့ကျင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများရန်,
အရာဝတ္ထု, stem ၏တူညီသောအမျိုးအစားမှကျယ်လောင်စွာအမြန်စာရင်း။
အနုပညာ၏အကျင့် Reading ပညာတတ်အသိပညာ၏အဆင့်ကိုတိုးပွါးခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျစာပေလေ့လာမှုအာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးလာအဆငျ့ကိုအထောက်အကူပြုရန် - မသိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းဖွံ့ဖြိုး။ ထောက်လှမ်းရေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေတ်သစ်စာအုပ်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဉာဏစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, အမြင်အာရုံသင်တန်းနှင့်ပဟေဠိရှိသည်။ ထောက်လှမ်းရေးတိုးမြှင့်ဖို့စာအုပ်:
အကျိုးစီးပွားနှင့်ကြည့်ရှုသူ၏ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ကြည့်ရှုရာ၏, Movies, ထိုစုံထောက်ဇာတ်လမ်းနဲ့ action ကို-ထုပ်ပိုးသည်းထိတ်ရင်ဖိုရည်ညွှန်း။ သူတို့ Non-စံ၏ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေထဲကနည်းလမ်းရှာပေးသောနှင့်အတူအဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့တွင်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဇာတ်ကားတွေ။ အတှေးအချေါထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဝိညာဏ်သစ်တစ်ခုအဆင့်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲသောအမြင်ထဲမှာပန်းချီကား:
နဂါး Tattoo နှင့်အတူမိန်းကလေး;
အဆိုပါ Da Vinci Code ကို;
အဆိုပါ Next ကိုသုံးနေ့ရက်များ။
ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာ့ထူးချွန်ဆုံးလူကို, စမ်းသပ်မှုများတာရိန်းစ Tao က, သင်္ချာ, အိုင်ကျူ-230 များ၏အဆင့်၏လေ့လာမှုမှာစေ့စပ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအသိအမှတ်ပြုသည်။ အကြိုက်ဆုံးပရိသတ်တွေ, ပါရမီသရုပ်ဆောင်များကိုတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်နှင့်အိုင်ကျူ၏မြင့်မားသောအဆင့်, သူတို့ကအောင်မြင်စွာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်လျှောက်ထားခဲ့ကြရသောအဖြစ်အဆင့်မြင့်ပြန်ရယူရှိသည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးအသိဉာဏ်ကလူ:
Dolph Lundgren - တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအသွင်အပြင်နှင့်အတူဆွီဒင်သရုပ်ဆောင်သည့်အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ 160 ၏အိုင်ကျူရှိပါတယ်။
Quentin Tarantino - အောင်မြင်စွာမျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌သင်တို့၏ထောက်လှမ်းရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ပါရမီလူတစ်ဦး - မင်းသား, ထုတ်လုပ်သူ, ဇာတ်ညွှန်း, ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအဆင့်ကိုအိုင်ကျူ-160 ။
အာရှ Carrera - အိုင်ကျူ-156 များ၏အဆင့်နှင့်အတူညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်။
ရှာရုန်ကျောက်ခေတ် - အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီး, မော်ဒယ်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ, သူမ၏အိုင်ကျူ-154 ။
နီကိုးလ် Kidman - လှပအသိဉာဏ်, သင်သည်အဘယ်သူ၏ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 132 အိုင်ကျူရှိပါတယ်မင်းသမီး, ဖော်ပြရန်နိုင်အောင်။
တစ်လူကန်လန်ကာ extrovert ကားအဘယ်သူနည်း
တစ်ဦး extrovert ကားအဘယ်သူနည်း
မျက်ရည် - အကြောင်းရင်းများ
ဒဿနအတွက် Solipsism - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအသစ်အမြင်
ငန်းအဆီ - ကိုအသုံးပြုခြင်း
အိမ်ထောင်ဖက် Celine Dion ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင် Montreal တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြလိမ့်မည်
ခရမ်းရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?
ရွှေဖရုံသီး - လွင်ပြင်၌ကြီးထွားလာ
အဘယ်အရာကို 75 နှစ်ကြာအဖွားပေးရ?
အမျိုးသမီးဟော်မုန်းပျက်ကွက် - လက္ခဏာတွေ, ကုသ